Fiverenana an-tsofina sy alàlan'ny orinasa - Shina mpamokatra & mpanamboatra sahirana, Mpamatsy
Ny fitaovana neoprene avo be sy fofonaina dia manampy anao hanatsara ny faharenan'ny ratsy, hanamaivana ny lamosinao, soroka ary ny tendanao, tohizo tsara sy mahitsy ny hazonao. Tsy toy ny mpanitsy fefy mahazatra izay mafy sy mametra ny hetsika fitaovam-piadiana. Zahao ny tadiny mifamatotra ho an'ny lehilahy sy vehivavy amin'ny vanim-potoana rehetra. Azonao atao ny misoratra ao anaty akanjonao ary mety tsy hita izy.
Tokony hanitatra ny postur
Famolavolana soritra hainganana miovaova, hatsembohana hatsembohana ary lamba fanamainty, manatsara ny vatanao mba hisehoanao ho ambony sy matoky tena, manamaivana ny soroka sy ny tendany, mametraka ny fitadidiana hozatra, ny fitaovana Velcro voafantina, milamina kokoa ary miaro ny hozatra, ny lamba malefaka, marefo sy mahazo aina, mora ny mitafy sy manaisotra amin'ny andilany mitsotra.
Fanohanana avy hatrany
Ny lamba maina sy mahamontsina ary jiro miadana, tsy manapaka fitaovam-piadiana, matevina ary matanjaka be miverina amin'ny fehikibo miaraka amin'ny fehikibo lava volo, ilay fitaovana Velcro voafantina tsara ary mifikitra mafy kokoa, izay azo antoka kokoa, manatsara ny toerana misy anao mba hisehoanao avo ary matoky tena, manamaivana ny soroka sy ny tendany, mora ny mitafy sy manaisotra soroka amin'ny soroka mitsangana.